Léopold Rebus: haneho ny tontolo sy ny fihanjahana | NewsMada
Léopold Rebus: haneho ny tontolo sy ny fihanjahana
Par Taratra sur 11/07/2018
Ho hafa noho ny hafa, satria tsy mbola mahavantana loatra ny mpanao hosodoko eto amintsika ny hoentin’i Léopold Rebus, etsy amin’ny Is’art galerie etsy Ampasanimalo, manomboka androany. Miompana tanteraka amin’ny tontolo hita maso sy ny fihanjahana ireo hosodoko harantiny ao amin’ity toerana ity.
Nambarany fa lohahevitra somary nambaniana, teo amin’ny tantaran’ny hosodoko, ireto havoitrany ireto. Noho izany, azo lazaina fa « halefaka » sy ho « tsotsotra » kokoa ny hanehoany ny fomba fijeriny mahakasika ireo lohahevitra ireo, ao anatin’ireo tabilao miisa 26, harantiny. Matetika, lehibe ireo tabilao anehoan’i Léopold ny aingam-panahiny. Hiavakakely ny amin’ity, satria ho kelikely avokoa izy ireo.
Matihanina tanteraka amin’ny hosodoko ity soisa ity. Nanomboka ny taona 1993-1994 no efa nianarany izany, tany amin’ny Art School any Meuron. Nitohy tany amin’ny Ecole d’Art any La Chaux-de-Fonds sy tany amin’ny Cité international des arts any Paris. Efa marobe ihany koa ny fampirantiana nataony, samirery sy niaraka tamin’ny mpanakanto hafa. Efa fanindroany koa ny ampirantiany, etsy amin’ny Is’Art galerie Ampasanimalo.